संकटा परिसरमा ‘क्वाःपा द्यो छेँ’को शिलान्यास « Pen Nepal
संकटा परिसरमा ‘क्वाःपा द्यो छेँ’को शिलान्यास
Published On :5October, 2020 2:33 pm By : पेननेपाल
काठमाडौं । काठमाडौ महानगरपालिका प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्यले आज संकटा परिसरमा रहेको ‘क्वाःपा द्यो छेँ’ को शिलान्यास गरेका छन् । २०७२ सालको भूकम्पले जीर्ण बनेपछि यो संरचना पुननिर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको थियो । यसको पुननिर्माण ‘संकटा संरक्षण समिति’ ले ९९ लाख ३८ हजार ६२२ रुपैयाँ लागतमा गर्नेछ ।
काठमाडौंको पहिचान भनेकै स्थानीय मूर्त अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा हुन् । यी सम्पदाको संरक्षण गर्ने ।ोत महानगरले उपलब्ध गराउँछ । शिलान्यासपछिको संक्षिप्त प्रतिक्रियामा प्रमुख शाक्यले भने, ‘हाम्रा सम्पदा बनाउने पैसा हामीसँगै छ । कसैसँग हार गुहार गर्नु पर्दैन । यो संरचनाको पुननिर्माण संकटा संरक्षण समितिले गर्नु झनै सकारात्मक कुरा हो । यसले महानगर, स्थानीय र सम्पदाबीचको त्रिपक्षीय सम्बन्ध दिगो बनाउँछ ।’
द्यो छेँ १७ औं शताब्दीमा ठूलो आँगनसहित बहाल शैलीमा निर्माण भएको संरचना मानिन्छ । इ. सं. १९३४ मा यसको पुननिर्माण भएको अभिलेखमा देखिन्छ । बुद्ध धर्माबलम्बीले सञ्चालन गर्ने धार्मिक गतिबिधिसँग यो भवन सम्बन्धित छ । भवनभित्र र बाहिर बुद्धका बिभिन्न रुपका मूर्ति राखिएका छन् । ३ तले यो भवन नेपाली शैलीको घर हो । यसलाई मौलिक निर्माण सामाग्रीको प्रयोग गरेर बनाइनेछ ।
कमलपोखरी नमास्न मेयरलाई ज्ञापन
काठमाडौं । कमलपोखरीमा रातारात डोजर चलाएकामा आपत्ति जनाउँदै संरक्षणकर्मी ९अभियन्ता० हरुले महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई
एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम लागू
ओखलढुंगा । प्रदेश नं १ का केही विद्यालयमा परीक्षणको रूपमा सञ्चालन गरिएको ‘एक विद्यालय एक
रावल र रोकायाले छाडे ओली पक्ष : कर्णाली प्रदेशसभाको यस्तो भयो समिकरण
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र जुम्लाका सांसद पदमबहादुर रोकायाले केपी
काठमाडौं महानगरले ल्यायो मोवाइल भ्यान सञ्चालनमा
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले आजबाट स्वाब संकलनका लागि मोवाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याएको छ । कोरोना
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर वैशाख १७ र २७
१९ वर्षीया किशोरी बन्ने भइन उत्तराखण्डको एकदिने मुख्यमन्त्री
एजेन्सी । हामीले हिन्दी फिल्म नायकमा अनिल कपुर एक दिनको मुख्यमन्त्री बनेको देखेका थियौं ।
मन्थली नगरपालिका–१० का वडा अध्यक्ष पक्राउ
काठमाडौं । रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर–१० का अध्यक्षलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । महानगरीय